Hanomboka amin’ny 2ora tolakandro ny matso sy ny fisafoana ny andian-tafika ataon’ny Filoha. Tsy hisy ny fiaraha-miasakafo lehibe fanao eny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha, izay mandeha ny fanakianana fa nataon’ny mpitondra nifanesy bizina io. Miapanga tena ny fanjakana raha hiteny an’izany satria izy ireo dia tao anatin’io ihany koa ary efa nitondra ny tetezamita. Voizina ny politikan’ny fitsitsiana, saingy tena mihatra amin’ny zavatra atao rehetra io sa amin’ny fotoana hahafahana manao serasera mipoapoaka hakana fom-bahoaka ihany ? Nitondra inona ho antsika, ohatra, ny dia nandaniana volabe tany Sénégal sy Frantsa na firenen-kafa ? Mety hain’ny mpitondra ny mitsingoloka fa feno halatra be vava ary mahatsiravina ny fanabontsinana faktiora (surfacturation) amin’ny hoe ampiakarin'ireo mpitondra teo aloha avo roa heny ny tena lany, ka raha 50 tapitrisa ariary, ohatra, no lany lany dia 100 tapitrisa ny faktiora aloa amin’ny volam-panjakana, ka ifampizarana ny tombony. Sahy milaza ho tsy nanao izany ve ny tetezamita ?